तपाईले उत्पादन गरेको सुन्तला बढि मूल्यमा बेच्ने भए यसो गर्नाैस् ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कृषि > तपाईले उत्पादन गरेको सुन्तला बढि मूल्यमा बेच्ने भए यसो गर्नाैस् !
तपाईले उत्पादन गरेको सुन्तला बढि मूल्यमा बेच्ने भए यसो गर्नाैस् !
म्याग्दी । म्याग्दीका कृषकले बेमौसममा बेच्नका लागि सुन्तला भण्डारण गर्न थालेका छन् । घार–७ बिरौटा र हिस्तान–९ दोसल्लेका कृषकले अनुकूलित तापक्रमयुक्त भवन (सेलार स्टोर)मा सुन्तला भण्डारण गरेका हुन् ।
भण्डारण गरिएको सुन्तला बेमौसममा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने बिरौटा बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद बरुवालले बताए । बिरौटामा रहेको सेलार स्टोरमा यस वर्ष १५ कृषकले तीन हजार किलोग्राम सुन्तला भण्डारण गरेका छन् । पुसमा बोटबाट टिपेको सुन्तला चैत–वैशाखसम्म राख्न सकिने अध्यक्ष बरुवालले बताए । बेमौसममा प्रतिकिलो रु दुई सयका दरले सुन्तला बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सुन्तलाको स्वाद र गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिन चिस्यानयुक्त वातावरण र सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्गमा पर्ने बिरौटाका कृषकले गत वर्ष गरेको परीक्षण सफल भएपछि यसपालि सुन्तला भण्डारणलाई निरन्तरण दिएका हुन् ।
दोसल्लेमा भने पहिलोपटक परीक्षणका लागि सोलार स्टोरमा सुन्तला राखिएको दोसल्ले व्यावसायिक सुन्तला कृषक समूहका अध्यक्ष मिलन गर्बुजाले बताए । “मौसममा व्यापारीले भनेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने भएकाले केही समय भण्डारण गरेपछि बेमौसममा बढी मूल्य पार्ने प्रयास गरेका हौँ”, गर्बुजाले भने ।
समूहका अनुसार ४५ घरधुरीको बसोबास रहेको दोसल्लेका कृषकले यस वर्ष रु २५ प्रतिकिलोका दरले करिब रु २० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका थिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बिरौटाको भवन बनाउन रु पाँच लाख र दोसल्लेमा रु चार लाख ४४ हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । कृषकले बिरौटाको भवनमा रु एक लाख ७५ हजार र दोसल्लेमा रु एक लाख ४८ हजार बराबरको श्रमदान गरेका थिए । सुन्तला भण्डारणको सुविधा भएपछि बगैँचा व्यवस्थापन, रोगकिरा नियन्त्रण र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने कृषि कार्यालयका प्राविधिक सहायक श्यामराज क्षेत्रीले बताए ।
पुससम्म फल टिप्दा बोटलाई असर नपुग्ने र आगामी वर्षको उत्पादनमा पनि असर नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ फागुन २९
२०७३ फागुुण २९ गते १४:४० मा प्रकाशित
तपाई पनि घर बनाउने हो ? जग्गा किन्न सरकारबाट यसरी पाईन्छ रु दुई लाख !
उद्योग दर्ताकोक्रम यसरी बढ्दै
प्रचण्डको धम्कीले काँग्रेस डराउँदैनः कोइराला
९ कम्पनीको १६ अर्ब ५९ करोडको हकप्रद सेयर आउँदै, कस्को कति ? (सूचिसहित)
मेगा बैंकको नाफा ८६ प्रतिशतले बढ्यो
नेप्सेमा रेड ह्याण्ड,निरन्तर घटेर नेप्से १५ सय अंकमा झर्यो
मोदीको नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिनः यस्तो छ शनिबारको सवारी रुट